Bungalow yokuthuthuzela eKloof
Kloof, KwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAntonia
Ifumaneka eKloof, iikhilomitha ezisi-7 ukusuka eMakaranga Botanical Garden kunye ne-2.9 km ukusuka eWaterfall Shopping Centre, iBungalow yethu ibonelela ngendawo yokuhlala yabantu abadala abathathu. Iintsana ukuya kwiminyaka emi-2 zisimahla. Ibhedi iyafumaneka ngesicelo.
Iza ne-WiFi yasimahla, i-air conditioning, i-infinity pool kunye ne-terrace.
Igumbi lokulala eli-1, ikhitshi elinefriji, i-microwave kunye nestovetop, igumbi lokuphumla eline-leather recliner kunye ne-sleeper couch, i-TV ene-flat-screen, igumbi lokuhlambela eli-1 kunye nedekhi egqunyiweyo enezixhobo ze-braai zilindele iindwendwe zethu.
Umnqweno wethu kukukhusela okusingqongileyo, ngoko ke siye satshintshela kumandla ohlaza kwaye phantse sizimele kubonelelo lwamandla.
Iindwendwe zethu mhlawumbi azinakuze zibe nokucinywa kombane ngexesha lokuhlala kwazo nathi kwaye ziya kukwazi ukuhlawulisa isithuthi sabo sombane nangaliphi na ixesha kwigaraji yethu.
Sibonelela umntwana wakho ngebhedi simahla kwaye sinepuli yokubhexa kwabo bancinci nabo.
Uya kufumana iziselo ezibandayo efrijini kunye nebhaskithi yeziqhamo xa ufika.
Izambatho zokuhlambela ezikhululekile zikulindile kwi-closet.
Uyakonwabela umgangatho ogqunyiweyo onembonakalo entle kunye nezixhobo zebraai.
Lo mhlaba ulungele abantu abakhubazekileyo abangasidingiyo isitulo esinamavili.
I-Krantzkloof Nature Reserve iku-3.9 km ukusuka kwikhaya leeholide, ngelixa i-Mpiti Waterfall ikumgama oziikhilomitha ezisi-7. Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane yiKing Shaka International Airport, iikhilomitha ezingama-56 ukusuka eComfort Bungalow eKloof.
Umbuki zindwendwe ngu- Antonia
Ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha nge-imeyile, ngefowuni okanye nge-WhatsApp
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kloof